जमानत बन्द गर्नुहोस्, अवसरमा लगानी गर्नुहोस् Martech Zone
बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
अमेरिकीहरू युद्ध, अवधि हराउन घृणा गर्छन्। एउटा दृश्यमा, मर्ने अटोमोटिभ उद्योग एक युद्ध हो जुन हामीलाई लाग्छ कि हामीले हराइरहेका छौं। हामी विश्वास गर्दैनौं कि हामी केहि हराइरहेका छौं, मलाई विश्वास छ हामी प्रगति गरिरहेका छौं। विदेशमा जाँदाका कामहरू सँधै अप्ठ्यारो लाग्दछन्, तर मानिसहरूले सँधै उपेक्षा गर्छन् कि हामी यहाँ नयाँ राष्ट्र सिर्जना गरिरहेका छौं जुन यस देशमा पहिले कहिल्यै सुनेका थिएनन्।
म यसको जीवित उदाहरण। नौसेना बाहिर ताजा, मेरो पहिलो काम एक समाचार पत्र मा एक औद्योगिक इलेक्ट्रीशियन थियो। म बाहिर धपाउनु भन्दा पहिले म एक दशक को लागी अखबारको उद्योग मा रहें, र म सँधै कृतज्ञ छु। मलाई लाग्छ के हुन्छ यदि मेरो वरिष्ठ अधिकारीहरू भएको भए जमानत र परिवर्तन गर्नु आवश्यक पर्दैन। के म अझै मर्न लाग्ने उद्योगमा पीडित छु?
जाँच गर्नुहोस् सामाजिक मिडिया प्रबन्धक स्थिति त्यो खुला छ HP। तिनीहरू प्रमाणित ब्लगि record रेकर्डको साथ कसैको खोजी गर्दैछन्, एक ज्ञान विकिस र twitter। तिनीहरू त्यो व्यक्तिको ज्ञान परिवर्तन गर्न र उनीहरूको सामाजिक मिडिया रणनीति निगरानी गर्न व्यवसायको लागि मुख्य प्रदर्शन सूचकहरू विकास गर्न चाहन्छन्।
कम्प्युटर निर्माण धेरै वर्ष पहिले अफशोरमा सरेका छ ... के केटाहरू जसले विदेशमा आफ्नो रोजगार गुमाए अमेरिकी सरकारबाट ह्यान्डआउट खोज्दै थिए? होईन, उनीहरूले दिशा बदले र डिजाईन र निर्माणबाट आफ्नो प्रतिभा परिवर्तन गरे र इन्टरनेटमा उद्यमी र सरल स्टार्टअपमा लगे।
यदि हाम्रो देश (र अन्यहरू) प्रविधिको उपयोग गर्नमा अग्रणी रहन चाहान्छ भने हामीले भविष्यको लागि निरन्तर हेर्नु आवश्यक छ। हामीले अटोमोबाईलहरू पहिले नै गरिसकेका छौं ... यसलाई सूचीबाट बाहिर जाँच गर्नुहोस् र यसलाई भुक्तानी भएको देशमा लगिन दिनुहोस्। यसैबीच, हाम्रो अटो उद्योगका कर्मचारीहरूले अर्को चुनौतीमा हेर्नु पर्छ जस्तै ईन्जिनियरिंग र वैकल्पिक उर्जा स्रोतहरू निर्माण गर्न।
ओल 'स्कूल बजारका लागि, यो मान्छे मा सार्ने समय हो! अर्को अवसरमा आफैलाई र तपाइँको क्लाइन्टहरूलाई शिक्षा दिन सुरू गर्नुहोस् - ब्लगि,, प्रतिष्ठा व्यवस्थापन र सोशल मिडिया यहाँ छन् - ती क्षितिजमा छैनन्। यो परिवर्तनको समय हो, तपाईंले आफैंलाई बेलआउटको लागि भीख माग्नु अघि।
एक साइड नोटमा, HP मा kudos एक आन्तरिक सामाजिक मिडिया रणनीति को विकासको आवश्यकता पूर्वानुमान को लागी!
नोभेम्बर २०, २००। 14::2008 अपराह्न
म अझ बढी सहमत हुन सकेन। यस्तो देखिन्छ कि केहि स्थानहरू / व्यक्तिहरू परिवर्तन गर्न र अनुकूलन गर्न चाहँदैनन् किनकि हाम्रो समाज टेक्नोलोजीसँग परिवर्तन हुन्छ। मलाई लाग्छ कि इण्डियाना यसको राम्रो उदाहरण हो, यति धेरै सरकारी कार्यक्रमहरू निर्माण रोजगार सिर्जना गर्न र ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, जबकि उनीहरू इन्डियाना प्राविधिक प्रगतिको लागि आकर्षणको केन्द्र हुनसक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्छन्।
ठिक छ डग - बजार गिरावट (खराब व्यवसायका निर्णयहरूको उल्लेख नगर्न) सरकारी ह्यान्डआउट्ससँग इनाम दिनु भन्दा रचनात्मकता र नवीनतालाई दबाउने उत्तम तरिका छैन।